travelitaly Archives | Page 2 of 3 | Gcina A Isitimela
ekhaya > travelitaly
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu ERoma sisixeko elihle, kodwa ngamanye amaxesha umhambi kunqwenelwa nentwana iintlobo. Abo yokuhlala eRoma elide ngokwaneleyo ukuba bacande kulo zinganqwenela mhlawumbi kujonga ejikeleza indawo, kakhulu. Ngethamsanqa, yiyo iihambo namhla ukuba! Considering how well…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu IYurophu bandile sites UNESCO Heritage World zitsala izigidi zabakhenkethi. Kukho iindlela ezahlukeneyo izinto ukuze ubone - evela ezikhumbuzo zokwakha nenkcubeko ukuze nemimangaliso eziyindalo kwiZwekazi Old. Ngeendawo ezininzi kangaka ukukhetha ukusuka, it can be difficult for…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Uhamba nabantwana kungaba neshologu okanye ixesha ifanelekileyo yokuphila kwakho. Ngenxa impilo abantwana bethu 'ngenkani ngumnqweno wethu ukuba ezikuthandayo, akukho ngokuqhelekileyo akukho indawo ephakathi. kunjalo, there are ways for you to make traveling with children…
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ukujonga ukuze ubone ezinye izakhiwo libalaseleyo kwi iholide yakho elandelayo? Ukuba kunjalo, akukho mhlawumbi akukho indawo engcono kunokuba Europe kuwe. Enoba unomdla izimbo bokwakha lwamandulo okanye enethemba ukufumana ezinye iimpahla ezaziwayo-sincinane, imizi yaseYurophu na enento. Makhe jonga…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Yinto engenakuphikwa kakhulu ezaziwayo-kakuhle ukuba iYurophu khona best sisi umgangatho. Kwaye xa imthanda itshizi, mhlawumbi ufuna ukwazi ukuba nguwuphi na lo sisi ilungileyo eYurophu kufuneka anikele nendlela yokufumana ngayo. Join us as we run through the…
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu The Best yokutyela European Michelin sikhokelo inika isiqalo enkulu ekucebeni uhambo ngololiwe ngeenxa Europe. I Michelin sikhokelo inika ngoku baseYurophu kukhethwe yokutya neehotele ku 38 imizi yaseYurophu. imizi abatsha abathathu kuphela eyongezelelwe kolu 2019 edition: Zagreb…
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu Yeyiphi indawo engcono ukonwabela pizza ngaphezu ilizwe yasungulwa ngayo, kunene? uthando Italy, uthando, ukumthanda lo okumnandi lokutya-jika-isidlo! Akukho pizza umqondiso Italy busuke luhlobo ehlambulukileyo zobugcisa, yaye ekugqibeleni UNESCO-evunyiweyo! Zizula Italy, uya kufumana pizza wavula ngo…